Vaovao - Ireo karazana switch mahazatra ampiasaina amin'ny fanamboarana elektronika
KW7F Water Switch Proof Micro
KW12 Mena sy Mainty
KW12F Water Switch Proof Micro
LZ5 Switch voafetra voafehy
LZ7 Switch voafetra voafehy
Kitapo herinaratra IPZ AC
Ireo karazana switch mahazatra ampiasaina amin'ny fanamboarana elektronika
Raha liana te hahalala bebe kokoa momba ny microswitches ianao dia eo amin'ny pejy ankavanana. Ato amin'ity lahatsoratra ity, isika dia hijery ireo karazana switch switch micro. Izany dia hanampy anao hisafidy ny singa mety mifanaraka amin'ny filan'ny tetikasa. Ity lahatsoratra ity dia hanome anao fahitana lalina kokoa momba ny karazana 6 amin'ireo fitaovana ireo. Andao jerena tsirairay izy ireo. Vakio hatrany raha te hahalala bebe kokoa.
Voatanisa etsy ambany ireo karazana enina amin'ireo singa ireo. Na dia samy manana ny asany tokony hataony aza ireo rehetra ireo dia misy fahasamihafana eo amin'ny volavolany. Ireo no mahasamihafa azy ireo.
2. Potsitra fanindriana bokotra
3. Rocker Switches
4. Rotary Switches
5. Slides Switches
6. Toggle Switches
Ny switch micro dia switch kely izay misy lever na bokotra fanindriana. Ireo singa ireo dia tsy mitaky ezaka ara-batana be loatra mba hiasa tsara. Satria kely dia kely ireo dia natao ho an'ny fampiharana kely ny tetikasa.
2) Karazan-bokotra manosika
Ireo singa ireo dia hita amin'ny fomba sy endrika maro. Ankoatr'izay dia karazan-fitaovana samihafa no ampiasaina hanamboarana azy ireo. Rehefa atosikao ny bokotra dia manokatra na manidy faribolana izy. Azonao atao ny misafidy amin'ny karazana fotoana fohy na mitapoka. Mihodina na mamono ireo tohiny taty aoriana raha tsy manindry azy ianao indray.
3) Karazana rocker
Rehefa manery an'ity karazana switch ity ianao dia hikotroka ny bokotra fitaovana hanidiana ny fifandraisana. Toy izany koa, raha ampifanesinao amin'ny ilany ilay izy, dia hanokatra ny faritra izy. Averina indray, ireo fitaovana ireo dia misy amin'ny endrika sy fomba samihafa. Ohatra, azonao atao amin'ny configurations roa: tsanganana roa na tsato-kazo tokana.
4) Karazana rotary
Araka ny anarany, ity karazana singa ity dia misy fifandraisana mifindra. Azonao atao ny maka sary an-tsaina ny dial amin'ny lakozia mba hahalalanao tsara ny fomba fiasan'ireny switch ireny.
Slide switch dia misy knob kely. Raha te hanokatra na hanidy ny fizaran-tany ao anaty fitaovana ianao dia mila atsofoka ao ny bokotra. Satria singa matevina izy ireo, dia mety hisy safidy mety tsara ho an'ny tetikasa kely, indrindra izay ilanao fanovana. Ohatra, ireo fitaovana ireo dia matetika ampiasaina amin'ny lalamby hanovana làlana ho an'ny fiaran-dalamby miditra.
Push Button Micro Switch, Switch switch amin'ny herinaratra, Toggle Switch, Potsero Button Footswitch, Kitendry Micro Push Micro Switch No Nc Miaraka, Toggle Switch Boot,